Cividini Guga daabac leh-HF29024, Shiinaha Cividini Spring daabacay sariiraha-HF29024-saareyaasha, shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Cividini Guga daabacaadda gogol-HF29024
SHAQAALAHA TAYADA PREMIUM - Waxaa lagu farsameeyay iyadoo la adeegsanayo velvet polyter subag qaali ah xagga hore iyo microfiber jilicsan oo xagga dambe ah xilliyada dayrta iyo habeennada jiilaalka. Tolmada qurxinta ee qurxinta ayaa ku dareysa muuqaal aan caadi aheyn, isla markiiba. Qalabkan gogosha leh ee tayada sare leh ayaa ah lahjadda ugu habboon qolka jiifka ama qolka martida.
Naqshad qurux badan iyo midabbo caan ah & naqshad - Naqshad qurux badan oo soo jiidasho leh ayaa leh isku-dhafnaan ballaaran oo midabbo ah oo siinaya muuqaal casri ah qolka.Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa in qol looga dhigo mid xeelad iyo qurux badan leh, maadaama loo baahan yahay in kor loo qaado quruxda qolka waxaana loo tixgeliyaa sida ugu fiican lammaanaha cusub sidoo kale. Waxay leedahay muuqaalka hoose, ee hal-abuurka leh iyada oo la keenaysa qayb faahfaahin iyo xeel dheer leh qolka..Barbaarta sariirta waa iftiin ku filan in loo isticmaalo cimilada diiran, laakiin sidoo kale waxay haysaa mid u gaar ah habeen qabow.
DHIMASHO LACAG LA'AAN AH
Tayada ugu sareysa iyo adeegga macaamiisha ee weyn. Wax soo saarkayagu waxay la yimaadaan tayada ugu sareysa heerka leh 100% qanacsanaanta macaamiisha. Daryeelka fudud iyo maqaarka saaxiibtinimada leh. Badeecadu waxay leedahay Farsamooyin heer sare ah iyo geedi socod caafimaad oo horumarsan, dheeh falcelin Gogosha sariirta waxay si fiican ugu socon doontaa dhaqidda muddada dheer.
Navy Blue qolka jiifka Eyelet Thermal Qalabka dahaarka Daahyada daahyada